काँग्रेसको बटमलाइन ओलीको बिदाइ र ‘अर्ली इलेक्सन’ | Ratopati
अब विधिवत् रूपमा ‘नेकपा एमाले’ पनि फुट्ने आँकलन
personलोकेन्द्र भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeफागुन २४, २०७७ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले अब ‘अर्ली इलेक्सन’को मुद्दालाई बटमलाइन बनाउने भएको छ । सर्वोच्चको फैसलाबाट नेकपा खारेज भई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किनुले अर्ली इलेक्सन काँग्रेसको मुख्य मुद्दा बन्न पुगेको हो ।
काँग्रेस नेता रमेश लेखकले काँग्रेसको मुख्य मुद्दा अर्ली इलेक्सन हुनुपर्ने बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘अब संसद् त्रिशङ्कु भयो । ६४ प्रतिशत मत भएको पार्टीले पनि स्थिरता दिन सकेन । हिजोबाट त्यो पार्टी विधिवत रूपमा दुई पार्टी भइसक्यो । त्रिशङ्कु संसद्ले न स्थिरता दिन सक्छ न यो प्रतिनिधि सभाले कम्युनिस्टको द्वन्द्वमा काम गर्न सक्छ ।’
त्यसो भएकाले अब ताजा जनादेशका लागि अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने उनको राय छ । पार्टी सभापतिका विश्वास पात्रसमेत रहेका लेखकले भने, ‘मूल कुरा अर्ली इलेक्सनमै जानुपर्छ । नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा सेकेन्डरी हो ।’
यस्तै सांसद गगन थापाले काँग्रेसको नेतृत्वमा देशलाई अर्ली इलेक्सनमा लगिने बताए । ‘देश अब इलेक्सनमा जान्छ नै । संसद् विघटनबाटै गत निर्वाचनको जनमत सकिएको थियो । फेरि हिजोको सर्वोच्चको निर्णयबाट नेकपा एमाले र माओवादीले पाएको जनमत सकियो अब । देश अब निर्वाचनमा जान्छ । निर्वाचन कसले गराउने ? कहिले गराउने ? कसरी यसलाई सम्हाल्ने भन्ने सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसले सुझबुझ पूर्ण ढङ्गले विभिन्न पक्षमा छलफल गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार काँग्रेसले अब कुनै हतार नगरेर पार्टी हित र संविधानको अनुकूल हुनेगरी निर्णय लिनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक बस्छ ।
थापाका अनुसार अब अर्ली निर्वाचनको विकल्प छैन । ‘हामीलाई नियमित सरकार चलाउने म्यान्डेट छैन । हामीले नेतृत्व गरेर जाने भनेको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि हो,’ उनले भने ।
यस्तै नेता एनपी साउदले काँग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने दाबी गरे ।
नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि ओलीको विकल्प खोज्दै काँग्रेस अर्ली निर्वाचनमा होमिने बताए ।
‘काँग्रेसले केपी ओलीको विकल्प खोज्छ । अनि मुलुकलाई अर्ली इलेक्सनमा लिएर जान्छ । ०७९ को वैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । काँग्रेस त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । मेरो प्रयास पनि त्यही रहन्छ,’ केसीले भने ।
पुनः स्थापित संसदमा निर्णायक रूपमा उदाएको काँग्रेसले यसका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको आग्रह छ ।
कमल थापा भने, ‘नेकपासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । अब प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओली संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ वा राजीनामा दिनुपर्छ ।’
‘यस अवस्थामा अपवित्र गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउन अस्वीकार गरी काँग्रेसले नयाँका लागि चुनावको बाटो खोलिदिनुपर्छ,’ थापाले भने । तर काँग्रेस ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जान तयार देखिने सङ्केत देखिएको छैन । काँग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा अर्ली इलेक्सनमा जान भने इच्छुक देखिएको नेताको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । अर्ली इलेक्सन हुँदा नेकपा एमाले पनि विधिवत विभाजित हुने काँग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ ।
नियमित चुनावमा जाँदा एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई माओवादीसँग मिलेर नयाँ पार्टी बनाउन कानुनी कठिनाइ छ । संसद् विघटनपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँमा भए पनि सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादीको एकता खारेज गरिदिँदा नेपाल पक्ष सङ्कटमा छ । प्रचण्डसँग बस्न कानुनी कठिनाइ र ओलीसँग जान नेपाल पक्षलाई नैतिक सङ्कट खडा भएको छ ।
कानुनलाई चुनौती दिएको खण्डमा माधव पक्षका नेताहरुले सङ्घ र प्रदेश सांसदको पद गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।
काँग्रेसका लागि निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले फुट्नुमा राजनीति लाभ हुने देखिन्छ । आगामी बाटो तय गर्दा यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरी निर्णय लिइने काँग्रेस नेताहरुको भनाइ छ ।